Lorix Cream – Online Myanmar Pharmacy
Size 15 g 30 g
15 g /5% 30 g /5%
Lorix Cream - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
လောရဇ် ဆေးတွင် ပါဝင်သော ပါမာထရင် သည် အင်းဆက်ပိုး၊ ကပ်ပါးပိုးများ ၊ ကို နှိမ်နှင်း နိုင်ပြီး လူ့ခနွာကိုယ်ကို အဆိပ်သင့်မှုမဖြစ်စေသောကြောင့် ဝဲရောဂါ နှင့်နေလောင်ခြင်းများ ၊နှင်းခူ၊ အရေပြားယားယံခြင်း ၊ အနီစက်ထွက်ခြင်း ၊အင်ပြင်ထခြင်း များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Permethrin 5% isatopical scabicidal agent.
ScabieS & pruritus.
Inhibits sodium ion influx through nerve cell membrane channels in parasites resulting in delayed repolarize- ton and thus paralysis and death of the pest.